လျှော့စျေးလက္ကား Kingwo Iot Mini ကိုမော်တော်ဆိုင်ကယ် Anti-ခိုးယူယာဉ်မော်တော်ကားခြေရာကောက်ဖုန်းအတွက်ဆိုင်ကယ် GPS Tracker စက်ရုံနှင့်ပေးသွင်းသူများ | Roadragon
OBD GPS စနစ် Tracker
ဂျီပီအက်စ် Tachograph & MDVR
Car Car Platform
လျှော့လက္ကား Kingwo Iot Mini ကိုမော်တော်ဆိုင်ကယ် Anti-ခိုးယူယာဉ်မော်တော်ကားခြေရာကောက်ဖုန်းအတွက်ဆိုင်ကယ် GPS Tracker
"ဟုအဆိုပါစာချုပ်အားဖြင့်လိုက်နာ, စျေးကွက်လိုအပ်ချက်ဆီသို့ညီ, သူတို့ကိုသိသိသာသာဆုရှင်သို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖောက်သည်များအတွက်အပိုပြည့်စုံခြင်းနှင့်စိတ်ကူးကုမ္ပဏီကိုထောက်ပံ့ပေးလွန်းအဖြစ်ယင်း၏ပရီမီယံရဲ့အရည်အသွေးအားဖြင့်စျေးကွက်ယှဉ်ပြိုင်မှုကာလအတွင်းကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲဖြစ်သည်။ အဆိုပါအဖွဲ့အစည်း၏လိုက်ကျိန်းသေလျှော့လက္ကား Kingwo Iot Mini ကိုမော်တော်ဆိုင်ကယ် Anti-ခိုးယူယာဉ်မော်တော်ကားခြေရာကောက်ဖုန်းအတွက်ဆိုင်ကယ် GPS Tracker များအတွက် client များ '' ပွညျ့စုံဖြစ်ပါသည်, ကျနော်တို့ယခုအများအပြားစျေးဝယ်များကြားတွင်တစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချတွင် track record ကိုတည်ဆောက်လေပြီ။ ...
Min.Order အရေအတွက်: 10 Piece/Pieces
ထောက်ပံ့ရေးနိုင်ခြင်း: 30000 Pieces per Month
"ဟုအဆိုပါစာချုပ်အားဖြင့်လိုက်နာ, စျေးကွက်လိုအပ်ချက်ဆီသို့ညီ, သူတို့ကိုသိသိသာသာဆုရှင်သို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖောက်သည်များအတွက်အပိုပြည့်စုံခြင်းနှင့်စိတ်ကူးကုမ္ပဏီကိုထောက်ပံ့ပေးလွန်းအဖြစ်ယင်း၏ပရီမီယံရဲ့အရည်အသွေးအားဖြင့်စျေးကွက်ယှဉ်ပြိုင်မှုကာလအတွင်းကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲဖြစ်သည်။ အဆိုပါအဖွဲ့အစည်း၏လိုက်ကျိန်းသေလျှော့လက္ကား Kingwo Iot Mini ကိုမော်တော်ဆိုင်ကယ် Anti-ခိုးယူယာဉ်များအတွက် client များ '' ပွညျ့စုံပင်ဖြစ်သည် ကားခြေရာကောက်ဖုန်းအတွက် ဆိုင်ကယ် GPS Tracker , ကျနော်တို့ယခုအများအပြားစျေးဝယ်များကြားတွင်တစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချတွင် track record ကိုတည်ဆောက်လေပြီ။ အရည်အသွေး & ဖောက်သည် 1st ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စဉ်ဆက်မပြတ်လိုက်စားဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့ သာ. ကြီးမြတ်ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ရန်မကြိုးပမ်းနှမြော။ ရေရှည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်အပြန်အလှန်ဆုလာဘ်မျှော်လင့်!
"ဟုအဆိုပါစာချုပ်အားဖြင့်လိုက်နာ, စျေးကွက်လိုအပ်ချက်ဆီသို့ညီ, သူတို့ကိုသိသိသာသာဆုရှင်သို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖောက်သည်များအတွက်အပိုပြည့်စုံခြင်းနှင့်စိတ်ကူးကုမ္ပဏီကိုထောက်ပံ့ပေးလွန်းအဖြစ်ယင်း၏ပရီမီယံရဲ့အရည်အသွေးအားဖြင့်စျေးကွက်ယှဉ်ပြိုင်မှုကာလအတွင်းကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲဖြစ်သည်။ အဆိုပါအဖွဲ့အစည်း၏လိုက်ကျိန်းသေများအတွက် client များ '' ပွညျ့စုံပင်ဖြစ်သည် ဆိုင်ကယ် GPS Tracker ,ကားခြေရာကောက်ဖုန်းအတွက် ,GPS စနစ် Tracker , ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေရှည်ဆက်ဆံရေးခိုင်မာအားတစ်ဦး key ကိုဒြပ်စင်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ client များအတွက်ဝန်ဆောင်မှုပေးအာရုံစိုက်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အစဉ်အမြဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ Pre-ရောင်းချခြင်းနှင့်အတူပေါင်းစပ်မြင့်တန်းဖြေရှင်းချက်၏ရရှိနိုင်မှုနှင့်ရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုတိုးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဈေးကွက်ထဲမှာအားကောင်းတဲ့ယှဉ်ပြိုင်သေချာ။
internal ဂျီပီအက်စ်နှင့် GSM အင်တင်နာ
motion နဲ့တုန်ခါမှုသတိပေးချက်များကို Mobile App ကိုတဆင့်စီမံကွပ်ကဲနိုင်ပြီး
PRODUCT မှ Discription
မော်တော်ဆိုင်ကယ် & စက်ဘီး Phoenix မြို့လုံခြုံတဲ့အိန္ဒိယအဘို့အ Redcompass ရဲ့ထူးခြားတဲ့ Wateproof ရှိပါတယ် GPS စနစ် Tracker မော်တော်ဆိုင်ကယ်များအတွက်။ ou ဆိုင်ကယ် tracker ၏ဖြတ်တောက်ခြင်းအစွန်းနည်းပညာကြောင့်ဘယ်နေရာမှာမဆိုဆိုင်ကယ်အတွင်း၌ပုန်းအောင်းနိုင်စွမ်းတဲ့ကျစ်လစ်သိပ်သည်း device ကိုဖြစ်လာမှနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ GPS စနစ် Tracker လူငယ်ခြေရာခံဘို့ပြီးပြည့်စုံဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်။ အိန္ဒိယတွင်ကြီးထွားလာရာဇဝတ်မှုနှုန်းကို & လမ်းယာဉ်မတော်တဆမှုများတိုးပွားလာမှုနှင့်အတူလူငယ်ဆိုင်ကယ်မွငျးစီးဘေးကင်းလုံခြုံမှုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလျစ်လျူရှု & မြန်နှုန်းစံချိန်စံညွှန်းများချိုးဖောက်။ မိဘတစ်ဦးအဖြစ်သင်အမြဲသူတို့ကိုလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်လိုက်ဖမ်းမရှိဘဲသင်၏သားငယ်အပေါ်တစ်ဦးစောင့်နိုင်။
ယခင်: ဇိမ်ခံကား / ဆိုင်ကယ် / လျှပ်စစ်ဆိုင်ကယ်အဘို့အစက်ရုံထွက်ပေါက် Google Maps ကိုအခမဲ့ Sftware အတူ 60days ကို standby အချိန်ကား GPS တည်နေရာ
နောက်တစ်ခု: ယာဉ် GPS ခြေရာကောက်စနစ်အတိုင်းစက်ဘီးစီး / မော်တော်ဆိုင်ကယ် GPS Tracker ခြေရာကောက်စက်ပစ္စည်းများအတွက် Quote
ဆိုင်ကယ် GPS Tracker
GPS စနစ် Tracker
ဖွင့်ပါ: 8:00 AM - ပိတ်: 17:00 pm တွင်
Dragon Bridge (SZ) Tech Co, Ltd ကို ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Professional GPS Tracker စက်တစ်ခုဖြစ်သော Shenzhen High-Tech Enterprise သာမကတရုတ်အမျိုးသားအဆင့်မြင့်နည်းပညာလုပ်ငန်းလည်းဖြစ်သည်။ Roadragon သည် GPS tracker ကို ၁၅ နှစ်ကျော်အာရုံစိုက်သည်။
Adress: ROOM တွင် 2606,6/ က F, Bldg 2, Duoli စက်မှုပန်းခြံ, Meihua လမ်း, Futian ခရိုင်, ရှန်ကျန်း
မော်တော်ယာဉ် terminal terminal စနစ်၏အကောင်အထည်ဖော်မှု ...
GPS နည်းပညာကိုအသုံးချခြင်း ...
ကား၏ GPS တည်နေရာနှင့်ပုရွက်ဆိတ်၏ဒီဇိုင်း ...
Taxi Dispatc ၏ဒီဇိုင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်မှု ...
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်မှတ်ပုံတင်မယ် USN ဘဝသတင်းလွှာ & vouchert ချွတ်တဲ့ 10% ရ
深 ICP 备 44030402001933။